Muuqaal Tilmaameed Afar Suuban oo Adag ah si aad u xoqdo boggaga bogagga
GitHub waa barnaamij horumarineed oo horumarsan shabakad ; inta badan waxaa loo isticmaalaa koodhka kombuyuutarka waxayna bixisaa adeegyadeeda koodhka (source code) (source code) (SCM) ee isticmaalayaasheeda. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho tiro badan oo bogag intarnet ah oo aad xoqdo sida shuruudahaaga. GitHub waxay bixisaa qorshooyin loogu talagalay isticmaalka gaarka loo leeyahay iyo kuwa xorta ah. Waxaad qaadi kartaa hawlo kala-saaris xogeed oo kala duwan leh qalabkan. GitHub ayaa sheegatay in uu xoqayo 40 milyan oo bog internet ah waxayna u adeegtay ku dhawaad ​​10 milyan oo qof oo adduunka ah.
Afar qaybood oo ku jira xoqidda bogagga shabakadda:
Google Author Authorship waa plugin WordPress ah oo leh waxyaabo badan iyo awoodo. Halkaas, waxaad xoqin kartaa bogagga intarnetka ee badan sida aad rabto. Marka hore, waa inaad ogaataa oo aad garatid bogagga aad rabto inaad xoqato. Tallaabada xigta waa in la muujiyo xogta ama gali URL of site, oo u ogolaan this plugin fuliyaan shaqadooda. Waxaa lagu dhejin karaa GitHub waxayna ku xoqin kartaa ilaa shan kun oo bog internet ah saacad, adigoon wax u dhimayn tayada. Intaa waxaa dheer, plugin wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku darno sawirrada G + profile si loo raadiyo natiijooyinka, u qorida qoraallado kala duwan isla markaana xaqiijiyo xaqiiqada dhabta ah. Waxay leedahay qaboojiye user-saaxiibtinimo oo ka soo saari karaan xogta la akhrisan karo iyo scalable aad u.
2. Dib u dhigista:
Daahitaanka Dayactirka waa mid ka mid ah keydka WordPress ugu fiican. Waxay ku haboon tahay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxayna xoqin karaan boggaga intarneedka ee aad rabto. Intaas waxaa sii dheer, Feed Delay waxay soo saartaa sheekada, xayeysiisay, kuna daabacdaa si sax ah, iyada oo ay ugu wacan tahay dhuumaha iyo guutooyinka si ay suurtogal u noqoto. Tan iyo markii la bilaabay, Feed Delay ayaa soo gashay wax ka badan seddex milyan bog oo boggan si guul leh, lambarkanina waa sii kordhaya maalin kasta.
3. Farriinta Feed-Scraper:
Soo bixidda iyo xog-saaridda waxaa badanaa lagu sameeyaa bots or crawlers, iyada oo aan wax kormeer ah aadanaha. Iyada oo Fariin ah Feed-Scraper, kaliya ma xoqin kartaa bogagga boggaga la doonayo laakiin raadi website-kaaga iyo hagaajinta darajooyinka mashiinka raadinta. Waxaa lagu dhejin karaa barnaamijka GitHub ee aad ku haboon tahay shirkadaha, barnaamijyada, iyo websaydhka.
Waa wali ah plugin WordPress kale oo cajiib leh oo leh qaabab badan. Iyada oo Copyright Free, waxaad xoqin kartaa bogagga intarnetka ee badan sida aad rabto. Fadlan waxay bixisaa shahaado si aad u muujiso haddii qof uu xaday qodobkayaga. Way ku waafaqsantahay dhammaan boggaga WordPress iyo blogyada gaarka loo leeyahay waxayna ku siiyaan xogta habboon ee habboon marnaba. Plus, uma baahnid inaad haysan kartid barnaamijka ama xirfadaha codsiga waxaana laga faa'iideysan karaa adeeggan mar kasta iyo meel kasta.
Horumarinta hannaanka GitHub wuxuu bilaabmay Oktoobar 2007. Mashruucyada GitHub waxaa lagu heli karaa ama lagu maamuli karaa interface-ga inter-line ah. Waxay noo ogolaanaysaa inaan ku dhajino bakhaarada dadweynaha ee bogga internetka waxayna qabataa hawlo kala duwan oo habboon. Qodobbada kor ku xusan waxay xogta xoqida ka helayaan RSS, goobaha warbaahinta bulshada, wargeysyada, waraaqaha safarka iyo blogyada gaarka loo leeyahay. Waa inaad sameysaa xisaab shakhsi ah si aad u xoqdo xogta qaabab la jecelyahay, hase yeeshee xisaabaadka dadweynaha ayaa la eegayaa oo la soo dajiyay iyadoon wax xisaabin ah Source .